Serivisy teknika - Shandong Guiyuan Advanced Ceramics Co., Ltd.
Taorian'ny fampiharana nandritra ny taona maro, ny teknisiana dia manamarina ny fahombiazana sy ny fahamoran'ny seramika ao amin'ny famokarana taratasy ataon'ny mpanjifa. Ny fikolokoloana dia mila atao ara-potoana raha misy teboka tapaka na lavaka. Aorian'ny famolavolana sy famerenana amin'ny laoniny ireo faritra ampiasain'ny havokavoka ary famerenana ireo ampahany tapaka, dia azo ampiasaina mandritra ny vanim-potoana hafa ny volo vita amin'ny seramika, izay mitahiry vola be kokoa noho ny miova matetika amin'ny volo HDPE. Diovina ary esorina ny boaty SS 304.
Miorina amin'ny fitakian'ny mpanjifa, ny SICER dia manome vahaolana nohatsaraina ho fanatanterahana tsaratsara kokoa ny sehatry ny tariby. Rehefa avy nizaha toetra ny fahamainana sy ny dewatering izahay dia mahita sy mamaha ireo olana mety hitranga amin'ny toerana sasany. Miaraka amin'ireo tetik'asa marobe izay notompoinay, dia nanangana rafitra SOA FANAVALANA QUANTITATIVE izahay+.